विश्वकपमा रोनाल्डोको प्रभाव कति ? के पोर्चुगलले उचाल्छ त उपाधि ? - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
विश्वकपमा रोनाल्डोको प्रभाव कति ? के पोर्चुगलले उचाल्छ त उपाधि ?
Posted by Headline Nepal | १८ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार १९:०९ |
१८ जेष्ठ, काठमाडौंं । विश्वकप फुटबल नजिकिँदै जाँदा विश्वकपमा चर्चामा रहने खेलाडीको चर्चा पनि चुलिएको छ । अर्जेन्टिनाका मेसीको चर्चा हुँदै गर्दा पोर्चुगलका रोनाल्डोको चर्चा नहुने कुरै हुँदैन । यी दुई खेलाडी यस्ता हुन् जसका फ्यान संसारका कुनाकुनामा छन् । कतिपय चिया गफमै यी दुई फुटबलरका फ्यानबीच नै चर्काचर्की हुने गर्छ ।
यो सामाग्रीमा हामी क्रिस्टियानो रोनाल्डोको चर्चा गर्दै छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलले पाएको महान् फुटबलर मध्येका एक रोनाल्डो हुन् । उनी रियल मड्रिडका स्टार त हुँदै हुन् अहिले भने उनी पोर्चुगलका महत्वपूर्ण खेलाडी धेरै हुन भन्नुपर्छ । रुस विश्वकपमा पोर्चुगललाई विश्वकप उपाधि दिलाउने लक्ष्य उनको छ।
रोनाल्डोको चर्चा क्लब फुटबलमा मात्र छैन । उनी पोर्चुगलको सिनियर राष्ट्रिय टोलीबाट हालसम्म एक सय ४९ खेल खेलिसकेका खेलाडी हुन् । १४९ खेलमा उनले ८१ गोल गरेका छन् । पोर्चुगलका लागि सर्वाधिक गोल कर्ताको सूचीमा उनको नाम स्वर्ण अक्षरले लेखिएको छ ।
रोनाल्डोले सन् २०१६ मा फ्रान्समा भएको युरोकप फुटबलको उपाधि उचालेपछि विश्व फुटबलमा सर्वाधिक चर्चामा रहँदै स्थापित भए । युरोकप २०१६ को उपाधि पोर्चुगलले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा सबैभन्दा ठूलो हो ।
रोनाल्डोका फ्यान अनेक छन् । केही तिब्र गतिका फुटबलर भनेर मनपराउँछन् । केही उनको सिक्स प्याक देखेरै लोभिन्छन् भने केही उनको चलाखीपूर्ण फुटबल कलाको खुब प्रशंसा गर्छन् । उनको क्षमता भनेके गोल खुट्टामा परेपछि विपक्षीलाई छुन नदिनु हो । उनको प्रहार कहिल्यै पनि मिस हुँदैन । टिम संकटमा परेका बेला रोनाल्डोले अहिलेसम्ममा खेलमा खुशी दिँदै आएका छन् ।
लामो समयसम्म फुटबल खेलेका रोनाल्डोको लागि रुस विश्वकप अली धेरै नै विशेष छ । उनले आफ्नो देशलाई विश्वकपको उपाधि दिलाउने सपनालाई रुसबाटै साकार पार्ने सोच बनाइरहेका छन् । रोनाल्डोले रुस विश्वकपलाई आफ्नो सफल खेल जीवनमा अर्को सिँढी बनाउने अनुमान फुटबल पण्डितहरुको छ ।
Previous‘पिडाको राजधानी’ले तहल्का पिट्दै ! (हेर्नुहोस् भिडियो)
Nextओली सरकारमा थपिए दुई उपप्रधानमन्त्री, बास्कोटाको पनि मन्त्रीमा बढुवा
काठमाडौंमा बैंकिङ् एक्स्पो हुने
३ माघ २०७४, बुधबार १३:३९
मेरी कोमपछि पिटी उषा बन्दै प्रियंका
२१ आश्विन २०७४, शनिबार १७:१०
अकुत सम्पत्ति छानबिनः २ सय जना अख्तियारको उच्च निगरानीमा
१५ भाद्र २०७४, बिहीबार ०७:२३
नेपाल गुणस्तर ५३३ अन्तर्गत ‘स्टान्डर्ड फर एलपीजी बोटलिङ अपरेसन’ मापदण्ड ल्याउने तयारी
३१ श्रावण २०७३, सोमबार ०८:५७